दुबईबाट अपरिचित दाईले रमिताको लागि लेखेको चिठीले ३ करोड नेपालीको मन रुने छ ……. - Hamro Abhiyan
म अपरिची दाजुको तर्फवाट तिम्रो आत्माले शान्ती पावस स्वर्गमा वास पावस भन्न चाहान्छु । हुनत: प्यारी वहिनि रमिता तिमिले यो अपरिचित दाजुको लेखाइ र भनाइलाइ नत देख्न सक्छेउ न पढ्न नै तै पनि मन थाम्न सकिन लेख्न सुरु गरे । तिम्रो मृ-त्युले पुरै देश तातियको छ । जताततै सामाजिक संजालको भित्तामा तिम्रो मात्र पोस्ट गरियको छ त्यसमा मैले धेरै दु:ख व्यक्त गरे शेहेर गरे तर मनले शान्त मानेन आज तिम्रो लागि केही लेख्न वा’ध्य भय बहिनी रमिता ।
बहिनी रमिता मैले देखेको त छैन अहिले तिम्रो घरमा के चलिरहेको छ ? मलाइ लाग्छ जताततै सन्नाटा छायको होला तिम्रो मम्मी, वुवा वे’हिसिमा छोरी छोरी भन्दै चि’च्याउनु भयको होला । मलाइ थाहा छ तिमी जस्तै बहिनी मैले पनि गु’मायको हु । त्यस समय कस्तो थियो मेरो मम्मी , वुवाको हालत म बुझ्न सक्छु । त्यही भयको छ तिम्रो घरमा तर तिमिले छोडेर गयौ पा’पी दैवले भनौ या पा’पी गाडी चालकले तिमिलाइ लियर गयो । तर तिम्रो आफन्त , दाजु भाइ,दिदी बहिनी छरछिमेक तिमिलाइ सम्झेर आँसु बगाइ रहेका छन । तिम्रा श्रीमान तिमिलाइ सम्झेर पागल जस्तै भयर तिमि कहाँ आउछु भन्दै छन । तिमिलाइ भन्दा पी’डा यहाँ रहनेलाइ भयको छ बहिनी रमिता ।
बहिनी तिम्रो दुलहिनी बन्ने सपना यो जुनिमा त पूरा भयन अब अर्को जुनिमा पक्कै पूरा हुनेछ । त्यतिखेर तिमिलाइ कसैले पनि रिक्ने छैन तिमिलाइ दुलहिनी वन्नलाइ ।
अब देखि अत्यावश्यकीय वस्तु चाहिएमा ‘११३७’ मा फोन गर्नुस्, घरमै आउँछ ! […
सरकारले एक हप्ताका लागि गरेको नेपाल बन्दमा बिहानै जे देखियो, उल्लंघन गरे ६ महिना जेल
मृ’त्युको काखमा पुगिसकेकी एक बालिका आमाको साहसिलो कदमका कारण बाँच्न सफल
सेना र प्रहरी लगाएर ग्यास वितरण गरिने भन्दै, मन्त्री भट्टले दिए यस्तो चेतावनी !…